ဖြစ်နိုင်ချေလေးချက် Batman LEGO အစုံအသစ်များတွင်တွေ့နိုင်သောအချက်များ
09 / 10 / 2021 09 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 272 Views စာ0မှတ်ချက် 76179 Batman & Selina Kyle မော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုက်စားသည်, 76183 Batcave: ပုစ္ဆာမျက်နှာချင်းဆိုင်, အဲဖရက်, အန်ဒီ Serkis, Batman, Batman Movie,, ဘရုစ်ဝိန်း, Catwoman, DC က Fandome, DC က Fandome 2021, Lego, Lego Batman, Lego DC က, လမ်းပြ, ဆယ်လီနာ kyle, အဆိုပါ Batman, Riddler သည်
နောက်တွဲတစ်ခုရှေ့ရောက်နေတယ် DC FanDome ၂၀၂၁၊ အသစ် Lego အဆိုပါ Batman ဇာတ်လမ်းတွဲများသည်ဇာတ်၌အချက်လေးချက်ကိုဖော်ပြခဲ့ပေမည်။
အဆိုပါ Lego The အတွက်တွဲဖက်ပါ ၀ င်သောမော်ဒယ်များအုပ်စု Batman ထင်ရှားခဲ့သည်ပြပွဲမှာပါဝင်မယ့်ဇာတ်ကောင်တွေအပြင်ဇာတ်လမ်းရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းအချို့ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။
ထိုအရာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည် Batman လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် DC FanDome ပွဲ ၎င်းရုပ်ရှင်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်သောကြောင့်အောက်ပါအချက်အလက်များသည်ရုပ်ရှင်၌ထည့်သွင်းရန် (သို့) စူးစမ်းရန်အတည်ပြုခြင်းမခံရပါ။ Lego အုပ်စု။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအရာအတွက် spoiler သတိပေးချက်အဖြစ်ယူပါ။
Selina Kyle၊ ဒါပေမယ့် Catwoman လိုမဟုတ်ဘူးလား။
Selina Kyle သည် The two တွင်ပေါ်လာသည် Batman သူမအရင်ကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တူတဲ့ Catwoman ဆိုတဲ့သူမရဲ့ကြောင်ပေါက်စလေးရဲ့ပုံစံမှာမပါ ၀ င်ပါဘူး။
ဇာတ်ကောင်ကိုရုပ်ရှင်မှာမပါ ၀ င်ဘူးလို့အတိအလင်းအတည်မပြုရသေးပေမယ့်အဲဒါကထူးဆန်းတယ် Lego သူမသည် Catwoman မဖြစ်မီရုပ်ရှင်သည်ဇာတ်ကောင်အတွက်မူလဇာတ်ကြောင်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသောအလားအလာရှိသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်သူမ၏အုပ်စုအမည်ကိုသုံးရန်အုပ်စုဖွဲ့သည်။
Bruce Wayne ဆိုတာသိဖို့ဒုတိယ spoiler သတိပေးစရာမလိုပါဘူး Batmanမရ။ သန်းကြွယ်သူဌေးသည်ရာဇ ၀ တ်မှုများကိုခြေရာခံရန်နှင့်တိုက်ဖျက်ရန်၊ သူ၏ယာဉ်များနှင့်အသုံးအဆောင်များစွာကိုရန်ပုံငွေကူညီရန်ကူညီသည်။
သို့သော်ဖော်ပြချက်များပြုလုပ်ခဲ့သည် ၇၅၁၈၃ Batcave: The Riddler Face-off မှ LEGO.com အထူးအမည်များ BatmanDrifter အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းသည်အတ္တဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဘရုစ်ဝိန်းသည်ရုပ်ရှင်၌ဒုတိယလျှို့ဝှက်အမှတ်လက္ခဏာရှိသည်၊ သူအရင်လက်ခံသည်ဖြစ်စေ၊ နောက်မှဖြစ်စေ Batman.
The အတွက်အဓိကရန်သူဖြစ်ပုံရသည် Batman Caped Crusader ၏အထင်ရှားဆုံးနှင့်လှည့်စားရန်သူများထဲမှ Riddler ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဇာတ်ကောင်သည်ရုပ်ရှင်သစ်အတွက်ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့ပြီးလှိုင်း၏အကြီးဆုံးအုပ်စုတွင်သာပေါ်လာပြီးသူသည်ရုပ်ရှင်၏အဓိကဗီလိန်ဖြစ်သည်ဟူသောအယူအဆအတွက်သက်သေအထောက်အထားများကိုပိုမိုငှားရမ်းခဲ့သည်။
ပွဲ ဦး ထွက် ၇၅၁၈၃ Batcave: The Riddler Face-offRiddler ၏ minfigure အသစ်ကိုအစိမ်းရောင်မျက်နှာဖုံးနှင့်ဂျာကင်အင်္ကျီတို့ဖြင့် crosshairs ၌မေးခွန်းအမှတ်အသားပြထားသောလိုဂိုအသစ်နှင့်အတူအမှတ်တံဆိပ်အသစ်နှင့်တွေ့နိုင်ပါသည်။
မင်းကြီးဂေါ်ဒွန်သည် Batcave အကြောင်းသိသည်
Batcave သည်အခြားအရာများကဲ့သို့မလျှို့ဝှက်နိုင်ပါ Batman စူပါဟီးရိုး HQ ၏တည်နေရာနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေလက္ခဏာကိုကော်မရှင်နာမင်းကြီးဂေါ်ဒွန်ပင်သိပုံရသည်။ Batman.
ပေါ်လာသည် ၇၅၁၈၃ Batcave: The Riddler Face-offဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကြံစည်မှုအချက်များအတွက်လူကြိုက်များသောကော်မရှင်နာမင်း Gordon ၏နောက်ဆုံး minifigure သည် Riddler ကိုဖမ်းရန်ကြိုးစားနေသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ပိုကြီးတဲ့ပုံစံမှာမင်းကြီးဂေါ်ဒွန်ရဲ့သီးသန့်အသွင်အပြင်ကသူနဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုနိုင်တယ် Andy Serkis ရဲ့ Alfred လည်းပဲ Zoë Kravitz 'Selina KyleBruce Wayne တို့အပြင်
← Lego Star Wars ၇၅၁၉၂ Millennium Falcon သည်အွန်လိုင်းတွင်စတော့ရှယ်ယာ ၀ င်လာသည်
သတိပေးချက်: Lego Creator Expert 77942 Fiat 500 ကို Zavvi တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လက်ကျန်ရှိသည် →